तिथि मेरो पत्रु » प्रेम समस्याको आउट राख्न सक्नुहुन्छ कसरी?
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: सेप्टेम्बर. 30 2020 |2मिनेट पढ्न
प्रेम मा गिरने को अनुभव कुरा सबैलाई उनको / उनको जीवनमा कम्तिमा एक पटक हुनु पर्छ. यो राम्रो कुरा यो अद्भुत अनुभव गर्न पर्याप्त सुअवसर नभएका धेरै केहि मान्छे छन् भन्ने छ.
प्रेम मा भएको यात्रा भावनात्मक पोषणयुक्त छ, जबकि, धेरै महत्त्वपूर्ण प्रेम जीवन भएको बनाउन अन्य थुप्रै छन्. प्रेम साँच्चै समस्या बाहिर तपाईं राख्न सक्छ; कसरी थाह मा पढ्न.
तपाईं बिस्तारै उमेरअनुसार हुनेछ
के पुराना देख भन्दा एक ठूलो समस्या हुन सक्छ? प्रेम समय देखि पहिले बूढा शिकार देखि तपाईं रोक्न सक्नुहुन्छ. तपाईं ओक्सीटसिन बारेमा थाह छ (यो romantics प्रेम हर्मोन रूप मा यो उल्लेख)? परिणाम बनाउने प्रेम वृद्धि मानव शरीर मा ओक्सीटसिन को स्तर मा. ओक्सीटसिन DHEA को उत्पादन ट्रिगर, आफ्नो विरोधी-उमेर बढन लाभ लागि जानिन्छ हर्मोन.
तपाईं आफ्नो छाला सेक्स पछि चमकती कसरी देख्न नगर्नुहोस्? के तपाईं बिहान पछि महसुस कसरी ऊर्जावान सूचना छैन? यी सबै किनभने DHEA को विरोधी-उमेर बढन लाभ को हो.
प्रेम तपाईं विश्वस्त हुन सिकाउँछ
शून्य वा कम विश्वस्त एउटै कुरा मात्र गर्न सक्छ, एक सङ्कटग्रस्त जीवन. यो सही काम रही देखि तपाईं रोक्न सक्नुहुन्छ; यो आफैलाई आवश्यकता समयमा सुने बनाइएको देखि रोक्छ, र अन्ततः तपाईं हुन योग्य के भन्दा एक कम एकाइ रहन तपाईं जबरजस्ती.
प्रेम को सबै भन्दा राम्रो पक्ष प्रभाव को एक विश्वस्त मा एक बढावा छ. के तपाईं कसैसित रोमान्टिक सम्बन्ध साझा जब अक्सर भन्ने व्यक्ति तपाईं एक सम्झनुहोस् / superwoman जस्तै महसुस. हो, आफ्नो साथी कुनै खास विषयहरूमा लागि तपाईं आलोचना सक्छ, तर समग्र तपाईं सधैं उहाँलाई लागि सबै भन्दा राम्रो रहने / उनको. तपाईं मा यो हुनेछ स्वतः instate आत्म-विश्वास र तपाईं एक अधिक विश्वस्त व्यक्ति बनाउन; जब तपाईं र तपाईंको समस्या को विश्वस्त आधा हल गर्दै छन्.
प्रेम लागूपदार्थ टाढा तपाईं राख्न सक्छ
प्रेम भन्दा लागूपदार्थको दुरुपयोग लागि एक राम्रो निवारक उपाय वा उपाय हुन सक्दैन. संयुक्त राज्य अमेरिका मा मान्छे गहिरो पदार्थ दुरुपयोग वृद्धिको दर विचलित छन्; प्रेम यस समस्या सबै भन्दा राम्रो समाधान हुन सक्छ.
पदार्थ दुरुपयोग र पिउने जस्तै बानी सामान्यतया निराश गौण हो. प्रेमले भरिएको खुसी विवाह राख्न सक्छ खाडी मा निराशा र यसरी एकदम दबाइ र रक्सीको दुरुपयोग गर्न पासोमा को कसैको संभावना कम गर्न सक्छन्.
प्रेम यौनजन्य रोक्छ
तपाईं कसैलाई प्रेम गर्दा, तपाईं उहाँलाई मात्र / उनको तपाईं वफादार हुने आशा छैन, तर पनि त्यस व्यक्तिको फिर्ता पछि Scratchy केहि पनि गरिरहेको जोगिन गर्छन. अधिक ठाडै यो राख्न, तिनीहरूले प्रेम व्यक्ति चोट गर्न चाहँदैनन् किनभने प्रेम मानिसहरूलाई वफादार रहन अतिरिक्त प्रयास गरिरहेका देखि नहिचकिचाउनुहोस् र मुख्यतया छ. तर, कसरी एसटीडी रोकथाम संग जोडिएको सकिन्छ आए?
एक राम्रो बलियो लिंक छैन.
कारण वफादार आफ्नो साक्षात्कार प्रेम मानिसहरूले सामान्यतया धेरै सेक्स साझेदार भएको छैन झिल्के गर्न र बारी मा यस विकास यौनजन्य रोगको आफ्नो संभावना कम. हो, यो कि जस्तो सरल छ.
यी रक्षा गर्न सक्छ समस्याहरूको प्रेम केही थिए. तपाईं अधिक प्रेम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने, बस प्रेम पर्नु.